Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ သံဃာ့ဆန္ဒကို ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ သံဃာ့ဆန္ဒကို ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက် ရှိကုန်သော သံဃာတော်အရှင်မြတ်များသည် ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သံဃာ့ဆန္ဒ၊ သံဃာ့ သဘောထား ကို အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သံဃာတော်အရှင်မြတ်များသည် အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက်ဆိုလျှင် သွေး အေးအေး မနေတတ်ပါ။ အရေးကြီးက သွေးနီသည့်စိတ်ဓာတ် အပြည့်အ၀ ရှိပါကြပါသည်။ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ဖျက်စီးနေသော၊ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားများကို အနိုင်ကျင့်၍ လူမဆန်စွာ မီးရှို့သတ်ဖြတ်နေသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ကန့်ကွက်တားဆီးသွားမည် ဖြစ်ပေ သည်။
ယင်းသို့ သံဃာ့ဆန္ဒကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းသည် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို ဖြစ်စေ လိုသော ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ပုဂံခေတ်ကကဲ့သို့ ရှမ်း ဗမာ ကချင် ကရင် ကယား မွန် ရခိုင်စသည့် မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအချင်းချင်း လက်တွဲကာ အေးချမ်းစွာ နေလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကိုလည်း လွှတ်တော် ၂-ရပ်လုံးသို့ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းကြေငြာချက်မှာ အချက် (၅)ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း (၅)ချက်မှာ . . .
(၁)၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ မေ ၂၈-ရက်နေ့သည် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် မမေ့နိုင်သော နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ “သွေးချောင်းစီးပြီး နိုင်ငံပြိုကွဲနိုင်သော အန္တရာယ်”ကို ထင်ထင်ရှားရှား မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် လူမျိုးခြား ဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီလူမျိးများ၏ ရက်စက်မှု၊ စော်ကားမှု၊ ဗိုလ်ကျမှု၊ အနိုင်ကျင့်မှုကို မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ခံလိုက်ရသည့်နေ့ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မေ ၂၈-ရက်နေ့သည် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကို တပ်လှန့်ခြင်း၊ သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်းပင် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုနေ့ကို “ကျောက်နီမော်ရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံနေ့” အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
ထိုမေ ၂၈-ရက်နေ့၌ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်နီမော်ရွာနေ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်အမျိုးသမီး မသီတာထွေးကို လူမျိုးခြားဖြစ်သည့် ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး သုံးယောက်က မုဒိန်းကျင့်၍ သတ်ဖြတ်လိုက်၏။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးသုံးယောက်သည် မြန်မာမြေပေါ်မှာနေ၊ မြန်မာ့ရေကိုသောက်၊ မြန်မာ့ဆန်ကိုစား၍ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသူ ရခိုင် အမျိုးသမီးလေးကို လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းသည် “ယာရှင်ကို မျောက်တွေကမောင်း” ဆိုသကဲ့သို့ အိမ်ရှင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကို ဗြောင်ကျကျ ဗိုလ်ကျခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ဤနယ်မြေ၌ မနေရဲအောင် ကြိုတင်စီမံချက်ဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စော်ကားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အကြမ်းဖက်သမား ဘင်္ဂါလီအုပ်စုများကို အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်၌ ထိရောက်စွာ အရေးယူ ပေးပါရန်။
(၂) ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်း (သို့မဟုတ်) ကျောက်နီမော်အရေးအခင်း၏ ဖြစ်ရခြင်း၏ လက်သည် တရားခံကို ရှာဖွေရပေမည်။ လှုံ့ဆော်သူ၊ တိုက်တွန်းသူမရှိလျှင် ဤမျှလောက် လုပ်ရက်စရာ အကြောင်းမရှိ။ ရခိုင်အမျိုးသမီးလေးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်သူများမှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၃-ယောက် ဖြစ်သော်လည်း သူတို့၏ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေသူ၊ လှုံ့ဆော်နေသူ ရှိပေသည်။ ထိုသူများသည်သာ အဓိကတရားခံ ဖြစ်ပေသည်။
“အရင်းစစ်လျှင် အမြစ်မြေက”ဆိုသကဲ့သို့ ယခုလို လူသတ်၊ မုဒိန်းကျင့်၊ မီးရှို့စသဖြင့် အတင့်ရဲစွာ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ၏ သွေးထိုးမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်ပဋိပက္ခ (သို့မဟုတ်) ကျောက်နီမော် အရေးအခင်း၏ အဓိကတရားခံမှာ “မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ” ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာသိ ကြေငြာပေးရန်။
(၃) ၁၈၂၅-တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ မွတ်စလင် ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ ၃၀,၀၀၀ ရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၃၀- ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ ၂၁၇၈၀၀-ထိ တိုးပွားလာပါသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရက မွတ်စလင် ဘင်္ဂါလီ လူဦးရေ တိုးလာမှုကိစ္စကို စိုးရိမ်လာသောကြောင့် အခြေအနေစုံစမ်းရန် ၁၉၃၉-ခု ၌ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တခု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
ထိုကဲ့သို့ တဖြေးဖြေးနှင့် ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ တိုးပွားလာခဲ့ရာ ယခုအချိန်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေမှာ ၁-သန်း ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်၏။ အဘယ့်ကြောင့် ထိုမျှလောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးပွားလာသနည်း။
မွတ်စလင်အုပ်စုဝင် မှောင်ခိုဂိုဏ်းကြီးတစ်ခုမှ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီကုလားများကို ခိုးသွင်းခြင်း၊ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသူများကို မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်အောင် သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ ဇနီးများများယူခြင်း၊ သားသမီးများများ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ စသည်ဖြင့် မတရားသဖြင့် ကြိုးစားသောကြောင့်ပင်တည်း။
အစိုးရအဆက်ဆက်သည် မွတ်စလင်အုပ်စုဝင် မှောင်ခိုဂိုဏ်းကြီးအကြောင်း မသိကြပါ။ ယင်းမှောင်ခိုဂိုဏ်းကြီးသည် တစ်ဘက်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို မြန်မာ နိုင်ငံ၌ နေထိုင်ခွင့်ရအောင် လိမ်ညာ၍ မှတ်ပုံတင်များရအောင် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်အတုများ ပြုလုပ်ပေး ခြင်း၊ ထိုသို့မှ မရလျှင် နိုင်ငံတကာ၏ ထောက်ခံမှုရအောင် ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် “မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား” ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာများမှ တဆင့် လူသိထင်ရှား ထုတ်ဖေါ်ပြော ခိုင်းခြင်းစသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြဿနာပေါင်း သုံးခြောက်ထောင်ကို မီးမွှေးနေသော မွတ်စလင်အုပ်စုဝင် ယင်းမှောင်ခိုဂိုဏ်းကြီးကို စိစစ်ဖေါ်ထုတ်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပေးရန်။
(၄) ဖဆပလခေတ် အစိုးရမှသည် ယခုအစိုးရမတိုင်မီအထိ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ ခိုးဝင်လာသောကြောင့် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေး၊ ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်ပြီး ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို မောင်းထုတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ယခု အချိန်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ၀င်လာမဆဲတသဲသဲပင်။ ထို့ကြောင့် တရားမ၀င်နေထိုင်လျက် ရှိသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားရေးအတွက် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေး ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးကဲ့သို့ စစ်ဆင်ရေးများ ပြန်လည် ပြုလုပ်ပြီး တိုင်းတပါးသား ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို အမိမြန်မာပြည်မှ နှင်ထုတ်ပေးရန်။
(၅) ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်၌ ကမ္ဘာ့လူသားများကို မီးလောင်တိုက်သွင်းနေသည့် မွတ်စလင်အုပ်စုဝင် “အယ်လ်ကိုင်ဒါ” အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာက“အကြမ်းဖက်အဖွဲ့” အဖြစ် အတိအလင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နေသော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပေသည်။
တချို့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် ယင်းအယ်လ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ကာ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ် များလုပ်ဖို့ ရေတိုရေရှည် စီမံကိန်း ရေးဆွဲထားပေသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းသည် တခဏချင်း ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဇွန် ၁၃-ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးသတင်းအရ အိမ်ခြေပေါင်း ၂၅၂၈ - မှာ မီးရှို့ခံလိုက် ရ၏။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား ၂၉-ယောက် အသတ်ခံလိုက်ရ၏။ တစ်ရွာသား၏ ဗိုလ်ကျခြင်းကို ခံလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးဆိုသည်မှာ ၁၈၂၄-နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ပြီးမှ ၀င်ရောက် လာသော မွတ်ဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် စစ်တကောင်းတောင်တန်းနေ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး များ ပင် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်မှု လက်အောက်၌ လယ်ကူလီများအဖြစ် ရောက်လာကြသူများပင်တည်း။ ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်များက သူတို့ကို သနားသဖြင့် အမှတ်မထင် လက်ခံထားခဲ့ရာမှ တဖြေးဖြေး တိုးပွားလာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားကို သနားခြင်း၏ ဆိုးကျိုးပင်တည်း။ အားနာက ခါးပါရသည် မဟုတ်ပါလော။
၁၉၂၁- ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေသည့် မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အားလုံးကို အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားဟု ဘယ်တုံးကမှ မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ။
ယခုရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ၌ ယင်းဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာများကို မီးရှို့ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများကို လုယက်ခြင်းသည် လူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါ သည်။ ယင်းသို့ လူမဆန်သောလုပ်ရပ်များကို လုပ်နေသော ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် “မြန်မာ့ တိုင်းရင်းသား” လုံးဝ မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်ရှိ သံဃမဟာနာယကဆရာတော်များ၊ လူထုခေါင်းဆောင်၊ ပါတီခေါင်းဆောင်၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ပါမောက္ခကြီးများ၊ စာရေးဆရာများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ တို့မှ ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီများသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာသိ ကြေငြာပေးရန်။
ဘုရင်အနော်ရထာသည် အရှင်အရဟံကို ဆရာတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ တိုးတက် အောင် ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့် တည်ဆောက်ခဲ့၏။ အရှင်အရဟံကလည်း ဘုရားသားတော်ပီပီ တိုင်းသူ ပြည်သား လူအများအား ဓမ္မကို ဟောပြောပို့ချ၍ ဂုဏ်သရေရှိသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆရာဒကာလက်တွဲ၍ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သောကြောင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသည် ဘုန်းမီး နေလတောက်ခဲ့၏။ အမျိုးဘာသာ သာသနာသည် တိုးတက်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအတွက် အရှင်အရဟံနှင့် ဘုရင်အနော်ရထာ၏ ကျေးဇူးတို့ကား ဆပ်၍ မကုန်နိုင်လောက်အောင် ကြီးမား လှပေသည်။ ထိုကျေးဇူးတရားဆပ်သောအားဖြင့် ဆရာဒကာလက်တွဲကာ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား တိုင်းတပါးသားများကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းက တားဆီးကာကွယ်သွားရမည် ဖြစ်ပေသည်။
(၂၀၁၂-ခု၊ ဇွန် ၁၆-ရက်၊ စနေနေ့)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 23:05
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ သံဃာ့ဆန္ဒကို ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း . All Rights Reserved